Akụkọ - Usoro stampụ igwe
Usoro stamping: n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na -aga n'ihu na -anwụ anwụ, a na -amachibido igwe ọrụ ntu ntu iji mezue usoro dị ka kalenda, ịkpụ na ịgbado ọkụ. Agbanyeghị, ọ ka nwere obere akụkụ jikọtara ya na mpempe akwụkwọ stampụ, na mpempe akwụkwọ stampụ na -eji ngwa ọrụ arụ ọrụ na -abanye na ngwaọrụ ọgwụgwọ ultrasonic elu mgbe stampụ na ịgbado ọkụ iji wepu griiz antirust na slag ịgbado ọkụ. Mezue mwepụ nke agwa ịgbado ọkụ na burrs n'ime ụlọ peening gbara.
Nke a dị ezigbo mkpa iji zere sekit dị mkpirikpi na eletriki mkpụmkpụ mgbe ejiri akụkụ stampụ. N'ime ọgwụgwọ ultrasonic nke obere oge nke abụọ, tupu nyocha nke ọma nke akụkụ stampụ, a na-eji teknụzụ nhicha elu ultrasonic ọzọ wepu ihe fọdụrụ n'oge ogbugba ogbugba. Mgbe arụchara ọrụ niile dị n'elu, a na -ekewapụ akụkụ stampụ kpamkpam na efere oghere wee chekwaa ya iche. A na -etinye akụkụ stampụ na adịghị mma nke igwe na -ahazi ntu n'ime igbe mkpofu, akụkụ stamping ruru eru na -abanye na ogbako nkwakọ ngwaahịa.
N'ime usoro mmepụta, a chịkọtara otu esi ezere mmebi akụkụ stampụ dị ka ndị a maka ntụnye aka gị:
1. Gbanwee akụrụngwa stampụ iji melite nchekwa na ntụkwasị obi. Ka ọ dị ugbu a, enwere ọtụtụ ihe adịghị mma na sistemụ njikwa na sistemụ njikwa eletrik nke ọtụtụ akụrụngwa stampụ ochie. Ọ bụrụ na a nọgide na -eji ha eme ihe, ekwesịrị ịgbanwe ha n'ụzọ teknụzụ. Onye na -emepụta akụrụngwa stampụ ga -akwalite nrụpụta ngwaahịa iji hụ na nchekwa na ntụkwasị obi nke ngwa stampụ ahụ.
2 wụnye ngwaọrụ nchedo. N'ihi obere ihe nrụpụta, a ga -etinyerịrị ngwaọrụ nchekwa na arụ ọrụ stampụ nke na -anaghị achọpụta akpaaka ma ọ bụ na -eji ngwaọrụ stampụ dị mma, iji gbochie ihe ọghọm mmerụ ahụ nke enweghị mwepụ kpatara. Ngwaọrụ nchekwa dị iche iche nwere njiri mara dị iche na oke ojiji. Ojiji na -ezighi ezi ka ga -ebute ihe mberede mmerụ ahụ. Yabụ, ekwesịrị ịkọwa ọrụ nke ngwaọrụ nchedo dị iche iche iji hụ na ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma.
3. Gbanwee usoro, ịkpụzi na ọnọdụ ọrụ iji ghọta ọrụ aka na -abụghị ebu. Maka imepụta oke, anyị nwere ike bido site na ndozi nke usoro na ịkpụzi iji ghọta igwe na akpaaka. Dịka ọmụmaatụ, iji akpaaka, igwe na -arụ ọrụ ọtụtụ igwe na akụrụngwa, iji ngwa ịcha ọtụtụ na ngwaọrụ nrụpụta ihe eji arụ ọrụ, yana iji usoro jikọtara ọnụ dị ka ịnwụ anwụ na ngwakọta na -aga n'ihu. Ihe ndị a niile nwere ike ọ bụghị naanị hụ na nchekwa nke ọrụ stampụ, kamakwa na -eme ka nrụpụta arụmọrụ ka mma.
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Aluminum CNC Machined Parts, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Ihe nkedo, Ọnwụ nkedo Magnesium, Mmiri Efere, Ngwaahịa niile